Xirmooyinka bakhaarkayaga ku yaal Shiinaha ayaa loo diri doonaa ePacket ama EMS iyadoo kuxiran culeyska iyo cabirka sheyga. Xirmooyinka laga soo raray bakhaarkeena Mareykanka ayaa la soo mariyay USPS. Sidaa darteed, sababaha loojistikada awgood, waxyaabaha qaar waxaa lagu geyn doonaa baakado gooni ah.
Ma xakamayn karno khidmadaha kastamka, Annagu mas'uul kama nihin khidmadaha kastamka mar alla markii alaabtu rarto maaddaama oo ay siyaasad ahaan iyo waajibaadka soo dejintu aad ugu kala duwan yihiin waddan ilaa dal. Iibsashada alaabtayada, waxaad ogolaatay in hal ama inbadan oo baakado ah laguu soo daabuli karo lagana yaabo inaad hesho khidmadaha kastamka markay yimaadaan wadankaaga.